Nanomboka tamin`ny herinandro ambony dia maro ireo “Chef CISCO” manerana an'i Madagasikara noesorina tamin`ny toerany. Somary mahavariana fa didim-pajakana (Arrêté ) nosoniavin'ny minisitra mpisolo toerana Rejo Fihenena tamin`ny volana jona, izay efa tsy minisitra intsony nandritra ny volana maro, no nanendrena ireo Chef CISCO ireo. Zavatra efa tsy manaraka ny lalàna io fanapahana io. Tsy afaka namoaka didy vaovao ve ny minisitra Marie Therese Volahaingonirina ? Sa kosa tsy mahatapa-kevitra ao amin`ny minisitera iandraiketany ? Amin`izao ora hanoratana izao dia mandrangaranga ny hetsika eo anivon`ireo CISCO, raha ny loharanom-baovao voaray. Azon`ny minisitra atao tsara ny misoroka izany korontana izany aha kinga fandray fanapahan-kevitra izy. Nametraka ny olony ny minisitra teo aloha, ary mahoraka be fa izay no nahatonga ny ahiahy hoe sao hiasa hampandany ny kandidan'ny antoko MMM izy ireo ? Terena hanao famindram-pahefana tsy mifanaraka amin’ny lalàna ireo Chef CISCO ireo satria efa manomboka ny fampielezan-kevitra. Mety hanahirana ny fitondram-panjakana sy ny filoha Andry Rajoelina ity misoko mangina eo anivon’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena ity raha diso famindra amin’ny famahana ny olana eo ireo manampahefana isan-tsokajiny.